Nampahafantatra ny Xiaomi Mi 5s misy efijery 5,15 ", SD 821 ary 4GB RAM | Androidsis
Xiaomi dia manolotra ny Mi 5s miaraka amin'ny efijery 5,15 ″ Full HD, puce Snapdragon 821 ary RAM 4GB
Niandry ny hamelezana an'ity tsenambarotra ity tamin'ny finday noho ny antony maro manokana izahay. Ny iray dia tokony hahalala raha tena ny puce Snapdragon 821 hipetraka amin'ny fitaovana vaovao alohan'ny Google Pixel, ary ny iray hafa, raha toa ka afaka nanatsara ny sainam-piandohan'ity taona ity i Xiaomi, ny Mi 5. Raha ny zavatra hitantsika amin'ity vaovao ity ihany dia toa miatrika sambo vaovao isika finday avo lenta avy amin'ny mpanamboatra sinoa izay miaro ireo singa manana kalitao avo lenta sy ny fampisehoana rehetra hatolony, na dia eto aza izahay dia hanohy miaraka an'io solomaso tokana io any aoriana hahazoana sary mahafinaritra.
Vao avy nanambara ny Mi 5s i Xiaomi, finday avo indrindra an'ny orinasa tamin'ny hetsika iray tany Shina araka ny nampanantenainy ary nanangona tamin'ny vaovao isan-karazany avy amin'ireo andalana ireo ihany izahay. Anisan'ireo mampiavaka azy lehibe indrindra ny Fampisehoana 5,15p 1080-inch miaraka amin'ny tontonana fitaratra miolikolika, manana ny tsinainy ao amin'ny Qualcomm Snapdragon 821 quad-core vaovao ary mihazakazaka amin'ny MIUI 8 miorina amin'ny Android 6.0 Marshmallow. Fakan-tsarimihetsika mahery vaika iray izay ahafahan'ny tsirairay miatrika ny ambiny ambaratonga avo lenta ankehitriny, na dia tsy mamela euro be dia be aza izany rehefa mahazo azy amin'ny sasany amin'ireo magazay manafatra na Amazon tenany.
1 Ny boribory, lamaody
1.1 Famaritana mi 5s
Ny boribory, lamaody
Raha ataontsika lohalaharana io dia saika hampitahantsika azy miaraka amin'ny Google Pixel vaovao izay haseho amin'ny 4 Oktobra. Ny Xiaomi Mi 5s manana zorony boribory toy ny maro hafa, na dia manana ny mampiavaka azy aza fa manana ny vera miolakolaka amin'ny famaranana farany na amin'ny sisiny na amin'ny ambany sy ambony. Famaranana tsara amin'ny famolavolana vy tokana sy ny hateviny 8,25 milimetatra ho an'ny telefaona lehibe izay manolotra ireo fiasa rehetra azonao antenaina amin'ny sainam-pirenena iray.
Ankoatra ny efijery 5,15 ″ Full HD voalaza, ny puce Snapdragon 821 sy ny sosona MIUI 8 an'ny Android 6.0 Marshmallow. Afaka miantehitra amin'ny fahatsiarovana RAM 4 GB ianao ary ny fahafaha-manao lehibe amin'ny fakàna sary amin'ny alàlan'ny fananana solomaso Sony IMX 378 izay mitondra anao hatramin'ny 12 megapixel miaraka amina taratra LED taratra roa any aoriana. Fakan-tsarimihetsika 1 / 2.3, horonantsary detection autofocus (PDAF) 4K fakan-tsary, ary fakan-tsary eo anoloana 4 megapixel misy haben'ny piksela 2. Filokana lehibe tsy tokony hajanona ao anaty sary izay isaky ny mivoatra be dia be amin'ny ambaratonga rehetra avy amin'ny fitaovana Android; ny telefaona Xiaomi dia tsy ho ambany.
Aza adino ny Seranan-tsambo USB Type-C ary tsy misy ny jack audio 3,5 mm. Ny bateria dia 3.200 mAh, mihoatra ny ampy ho an'ilay efijery 5,15 ″ Full HD sy ny puce Snapdragon 821, izay mahomby amin'ny angovo bebe kokoa. Azo antenaina ny fizakan-tena lehibe. Ary farany, sisa tavela miaraka amin'ilay sensor sensor an'ny ultrasonika izay manitsy ny dian-tananay anaty jiffy isika.
Famaritana mi 5s
5,15-inch (1920 x 1080) Fampisehoana HD feno, famirapiratana 600, gamut miloko NTSSC 94,4%, 1500: tahan'ny fifanoherana 1
Quad-core Snapdragon 821 64-Bit puce dia nahatratra 2.15 GHz
3 GB RAM / 64 GB (UFS 2.0) fahatsiarovana anaty, 4GB RAM / 128 GB (UFS 2.0) fahatsiarovana anaty
Android 6.0 Marshmallow miaraka amin'ny MIUI 8
Fakan-tsary 12 MP aoriana misy tselatra LED taratra roa, aperture f / 2.0, Sony IMX 378 1 / 2.3, PDAF, fandraisam-peo video 4K, fihetsiketsehana miadana 120 fps amin'ny 720p
Fakan-tsary an-tsary 4 MP misy fakantsary 2um, f / 2.0 aperture, 80 degre ny zoro zoro, fandraisam-peo horonantsary 1080p
Scanner an'ny rantsan ultrasonika
Refy: 145,6 x 70,3 x 8,25 mm
Batterie 3.100 mAh miaraka amin'ny Qualcomm Quick Charge 3.0
Ny Xiaomi Mi 5s dia ho tonga fotsy mainty sy volamena miaraka amina vy vita amin'ny borosy sy volafotsy ary volamena rose miaraka amina famaranana matte. Ny vidin'ny RAM 3GB sy ny 64GB dia homena vidiny manodidina ny 299 dolaras ary ilay misy RAM 4GB sy 128GB amin'ny $ 344. Manomboka amin'ny 29 septambra dia hamidy any Chine.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Xiaomi dia manolotra ny Mi 5s miaraka amin'ny efijery 5,15 ″ Full HD, puce Snapdragon 821 ary RAM 4GB
Xiaomi dia manolotra ny Mi 5s Plus miaraka amin'ny efijery 5,7p 1080 ", fakan-tsary roa 13MP, Snapdragon 821 ary RAM 6GB